Ny fahaterahana indray - Vaovao mahafaly ho anao - Miomana hihaona amin Andriamanitrao- vaovao malagasy
Ny fahaterahana indray na nouvelle naissance dia asan’ Andriamanitra eo amin’ny fianan’i kristianina, io ilay lazain’i Jesosy Tompo tamin’i Nikodemosy ao amin’ny Jaona 3: 3 hoe: “Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray* (nouvelle naissance) ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra. [*Na: ateraka avy ambony]”, dia azavain’i Jesosy Kristy Tompo tsara mihintsy ny dikany hoe ateraky ny Rano sy ny Fanahy hitantsika izany ao amin’ny Jaona 3: 5 hoe: “Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra” .
Inona ary ny dikany hoe nateraky ny Rano sy ny Fanahy?
Raha mamaky ny bokin’ny Ezekela 36:25-27 isika dia misy izao teny izao:
“Dia hofafazako rano madio ianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo ianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.”
Ao amin’ny Baiboly ny tenin’Andrimanitra dia milaza zavatra maromaro ohatra : tahaka ny afo ( Jeremia 23:29), sabatra roa lela ( Heb 4:12), kanota ( na marteau), ary ny anakiray dia ny rano madio ( Jaona 15:13, Efes 5:25-26). Ny dikany hoe nateraky ny rano dia tsy inona fa nateraky ny tenin’Andrimanitra, arak any voasoratra ao amin’ny Jaona 1: 1;12-13 hoe: “Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon’ny nofo, na ny sitrapon’ny olona, fa naterak’Andriamanitra”. Izany hoe, misy fahaterahana roa ara-Baiboly, ny iray ara-nofo dia ny olombelona rehetra izay nateraky ny ray aman-dreniny ( ara-nofo) ny olona rehetra io izay tonga eto an-tany, fa ny anakiray dia ny naterak’Andriamanitra. SAFIDY IO, koa tsy ny rehetra no lasa zanak’Andriamanitra, fa izay misafidy ny ho naterak’Andriamanitra ihany. Tandindon’ny (image) fahaterahana ara-nofo ihany izy io satria toy izao ny fisehon’ny fiterahana ara-nofo:
– Misy rano mamono ilay zaza sy mamelona azy mandritra ny 9 volana sy mampitombo azy, mandrapaha tonga ny fotoana ivoahany tao an-kibon-dreniny (ny tenin’Andriamanitra izay miasa tsikelikely miantso ny mpanota hiverina ka mihamitombo ao am-pony)
– Misy ny fanaintainana mafy alohan’i fiterahana (matetika dia tapa-dalan-kaleha ny olona, ao ny marary be, ao ny sahirana mafy, ao ny olana maro samy hafa. Ireny rehetra ireny dia fanaintainana ho entin’Andriamanitra miaontso ihany koa (Rom 8:28).
– Ary rehefa teraka dia tsy maintsy mitomany mafy ilay zaza, satria feno rivotra ny tratrany raha voa miteraka (tandindon’i Fanahy Masina io izay mandresy lahatra sy miasa ary mampibebaka ilay olona rehefa avy niaky ny fahadisony sy ny famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompo koa maro ny mitomany noho izany) .
Tsy maintsy ny teniny aloha no heno voalohany, mandresy lahatra anao, miantso fibebahana amin’ny fahotana ary ny famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompo, ary ny Fanahy Masina no mampiaiky anao ny fahamarinana, ny fahotana, ny fitsarana (Jaona 16:7-8). Koa raha manaiky ianao dia matetika moa latsa-dranomaso mihintsy nohon’ny fahatsapana ny fahotana rehetra, ary mitomany sahala amin’ilay zaza teraka ireny ihany (ny zavatra hita-maso rehetra io misy heviny ara-panahy daholo).
Ireo ihany ny fepetra na condition azo antoka fa nateraka indray. Ivelan’izay dia tsy misy fa lasa fahaterahana tsy marina na fausse conversion no betsaka ka mahatonga ny olona maro tsy lasa lavitra amin’ny fanarahana ny Tompo. Raha fintinina dia:
– Tsy maintsy maheno tenin’Andriamanitra, mitory ny fahotana, sy ny famonjena
– Ny Fanahy Masina mandresy lahatra fa marina ny teny, ary resy lahatra ny olona iray
– Manapa-kevitra fa hiala amin’ny fahotana, mandray ny fanapaha-kevitra fa Jesosy Kristy no lohany ary miverin-dalana tanteraka.
Dia izay ny antsoiny hoe nateraka indray na nouvelle naissance.
Etsy andanin’izany dia ireto indray misy ohatra vitsivitsy izay mahatonga ny olona lasa manao fausse conversion:
– Fahagagana: izany hoe tsy tenin’Andriamanitra no torina fa lasa fahagagana no hita dia resy lahatra ny olona iray.
– Fihetsika ivelany no hita: ohatra mahita olona maontina dia resy lahatra fa tena miasa ao tokoa Andriamanitra.
– Tenin’olombelona: ohatra misy lehibem-piangonana na pasitera na fianakaviana mandresy lahatra anao.
Mety lalana ho entin’Andriamanitra hanokatra ny lalana fotsiny izany fa tsy maintsy ny Teniny foana no miasa ary ny Fanahiny vao azo antoka fa marina ny fahaterahan’olona iray (vraie conversion).
Tadidio, fa tamin’ny famoronana tsy tonga dia nisy akory ny mazava sy ireo zavaboary rehetra ( izany hoe: tsy niseho ny fahagagana raha tsy teo ny tenin’Andriamanitra ), fa niteny foana Andriamanitra hoe misia vao nipoatra ny zavatra rehetra (Gen 1), ary raha mamaky tsara isika dia tsy nisy afa-tsy ny Fanahiny sy ny Teniny no teo voalohany ( Gen 1:2-3). Tahak’izany foana ny fiasany hitantsika koa izany ohatra ao amin’i Zakaria 4:6: “Izao no tenin’i Jehovah amin’i Zerobabela: Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin’ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon’ny maro”.
Mila mitandrina be mihintsy isika fa maro ny manao fahagagana tsy mialoha tenin’Andriamanitra amin’izao fotoana izao.
Mety mametra-panontaniana isika hoe: fa maninona moa no tsy maintsy ny tenin’Andriamanitra foana no mandeha aloa? Ny valiny dia satria ny Teniny dia miteraka finoana ato am-pontsika, ny finoana anefa dia midika tsotra hoe fahatokina (confiance). Raha misy olona zao milaza amiko hoe: « Izaho mahavita mitifitra ny satroka eny amin’ny lohanao amin’ny basy avy eny ambony moto, nefa ny lohanao tsy voa », izay fotsiny ny teneniny, ianao anefa mbola tsy nahita azy nanao an’izany mihintsy. Koa raha manaiky izany ianao, dia avy eo andramany, dia ianao no tena mahatoky azy indrindra, satria mino nefa tsy mbola mahita, fa niteny fotsiny ihany izy dia nekenao fa marina. Dia tahak’izany ny porofo lehibe eo anatrehan’Andriamanitra dia ny finoana avy amin’ny teniny fotsiny ihany. Araka ny hita ao amin’ny Romana 10:17 “ Koa ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy.” Hebreo 11:1 “Ary ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita.”
Hita ihany koa izany tamin’i Jesosy Kristy tonga teto an-tany dia ny Teniny sy ny Fanahy Masina foana no miasa. Ny Teny sy ny Fanahy Masina izay tao anatiny. Izay ny Tompo vao manao fahagagana satria matetika foana Izy no milaza hoe: “Ny finoanao no nahavonjy anao”. Hitantsika anefa fa raha tsy misy ny Tenin’Andriamanitra tsy misy finoana. Niteny koa ny Tompo fa ny fanahin’i Jehovah Tompo no ao Aminy (Lioka 4:18), sy ny hoe raha ny Fanahin’Andriamanitra no amoahako ireo devoly (Matio 12:28), ao koa ny tenin’Andriamanitra milaza fa feno ny Fanahy Izy vao nadeha niasa (Lioka 4:1).
Ny fahaterahana indray izany na nouvelle conversion dia azo avy amin’ny tenin’Andriamanitra sy ny fiasanan’ny Fanahy Masina irery ihany. Koa diniho ary ny tenanao raha toa ka efa nateraka indray ianao na tsia.